Waxbarashada suuqa shaqadu waxay kaa dhigeysaa qof soo jiidasho u leh suuqa shaqada ee iminka taagan. Waxbarashadu badanaa waa mid si wadajir ah adiga iyo shaqo-bixiya la idiinkugu cabbiray, waxayna badanaa si toos ah kuu gaarsiineysaa in aad shaqo heshid.
Arbetsmarknadsutbildning waa waxbarasho gaaban oo lagu baranayo xirfadaha ay ka jirto baahi shaqaale leh waxbarasho xirfadeed. Waxbarashadu ma damaanad qaadeyso in aad shaqo heleysid, laakin si fiican ayey u hagaajineysaa fursadahaaga. Waxbarashadu badanaa waxay qaadataa laga billaabo dhawr usbuuc ilaa iyo 6 bilood, laakin mararka qaarkoodna wey ka dheeraan kartaa. Waxbarashadu waa waqti buuxa.
Waxyaabo badan ayaa saameynaya fursadahaaga ku aaddan in aad gashid waxbarashada suuqa shaqada. Waxaan miisaanka isla saareynaa waxbarashooyinkaagi iyo khibradahaagi hore, fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid iyo sida baahida suuqa shaqadu ay u muuqato. Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid. Waxaa xitaa lagaaga baahanyahay inaad buuxiso mid ka mid ah arrimahan:
Waa in aad buuxisay 25 sano.
Waa in aad ka yartahay 25 sano, aadna qabtaa naafanimo saameyneysa karaankaaga xagga shaqada.
Waxaad buuxisay 18 sano, sababo gaar ah awgoodna waxaa kugu adag in aad shaqo heshid.
Sidaan ayey wuxu u shaqeeyaan
Waxbarashada waxaa waddanka dacalladiisa ka bixiya shirkado kala duduwan oo waxbarasho, oo aan annagu hawsha u dirsannay. Halkan waxaad ka arki kartaa waxbarashooyinka jira waqtiga iminka ah. Haddii aad heshid wax aad u aragtid in ay kugu habboon lahaayeen, hindise ahaan ayaad u soo jeedin kartaa marka aad nala kulmeysid.
Inta aad dhiganeysid waxbarashada suuqa shaqada waxaad heli kartaa taageero dhaqaale. Wixi adiga ku khuseeya nagala hadal.
Marka aad ka qeyb qaadaneysid waxbarashada suuqad shaqada waxaad ku jirtaa ceymiska dhaawaca qofka iyo kooxda.